ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၊ လာအို ၊ နီပေါ နိုင်ငံများ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းမှ တိုးတက်လာခဲ့ - Xinhua News Agency
ကုလသမဂ္ဂ ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
စံသတ်မှတ်သည့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်သည် သုံးနှစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် ပြင်ဆင်မှုကာလသက်တမ်းတိုးခြင်းအား စည်းကမ်းထုတ်ထားခြင်း မရှိဘဲ သုံးနှစ်တစ်ကြိမ် LDC စာရင်းအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် တာဝန်ရှိသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒကော်မတီက ၂၀၂၄ သုံးနှစ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုရလဒ်ကို ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း သိရသည်။
The Committee for Development Policy uses three criteria to determine LDC status: per capita income, human assets, and economic vulnerability. ■
Photo – Women pick tea leaves atatea garden in Sreemangal, Bangladesh, Oct. 25, 2021. (Xinhua)